Qarax la eegtey ciidamo katirsan Dowlada &khasaaro kadhashey – Radio Baidoa
Qarax la eegtey ciidamo katirsan Dowlada &khasaaro kadhashey
Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu Aaso ayaa waxaa uu ka dhacaya agagaarka Isbitaalka Erdogan Ex-Digfeer oo ku yaalla degmada Hodan ee Gobolkan banaadir,waxaana la sheegay in lala eegtay Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay sheegeen in Gaari nooca loo yaqaano Cabdi bilaha oo ay saarnaayeen Askar ka tirsan ciidamada Dowladda qaraxa miino lagu weeraray,isla markaana ay qaraxaasi ku geeriyoodeen Saddex Ruux oo laba kamid ah yihiin Askartii gaariga saarneyd iyo wada Mooto Bajaaj.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in markii uu qaraxa dhacay ay rasaas farabadan fureen qaar kamid ah Ciidamada saarnaa gaariga qaraxa lagu weeraray taas oo aan geysan wax khasaaro ah.
Halka uu qaraxa ka dhacay oo u dhow Isbitaalka Erdogan Ex-Digfeer ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa gaarey Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya,kuwaas oo muddo xirey wadada walow markii dambe ay dib u fureen.
Majirt cid weli sheegatay mas’uuliyada qaraxa Miino ee lagu weeraray Gaari ay la socdeen Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda Somaaliya,hayeeshee inta badan qaraxyada iyo dilalka ka dhaca Muqdisho ayaa waxaa sheegta Al-Shabaab.
Guddoomiye Cusmaan Barre oo ka horymid xilka qaadis la sameeyey